ပြက္ခဒိန် + Planner ကစီစဉ်ခြင်း | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ပြက္ခဒိန် + ဇယားအစီအစဉျ App ကို
ပြက္ခဒိန် + ဇယားအစီအစဉျ App ကို APK ကို
ပြက္ခဒိန် + တဦးတည်းစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း app ကိုကနေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်များနှင့်အစီအစဉ်များစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အချိန်ဇယားစီမံသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသောအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
တဦးတည်းလွယ်ကူသောဖြစ်ရပ်စီမံ၌သင်တို့၏အချိန်ဇယားကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ သင်၏ Google အကောင့်များမှပြက္ခဒိန်အလိုအလျှောက်အားလုံးတဦးတည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြက္ခဒိန်ပေါ်ဖြစ်ရပ်များ, အစီအစဉ်များနှင့်ချိန်းသတိပေးချက်များဖော်ပြရန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကြိုက်အမြင်များနဲ့ options နှင့်သင်၏ပြက္ခဒိန်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
အသုံးပြုသူများသည်အလွယ်တကူသွားလာရင်း, သူတို့ရဲ့ပြက္ခဒိန်အသစ်ဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်အစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းနိုင်အောင်ပြက္ခဒိန် + ကိုလည်းအမြန်အချိန်ဇယားဆွဲ features တွေအတူသင်တို့သည်။ တစ်ဦးကုန်ထုတ်စွမ်းအား Ninja ကို Be နှင့်နောက်တဖန်အရေးကြီးသောဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်ချိန်းလက်လွတ်ဘယ်တော့မှ!
CALENDAR သည် + အင်္ဂါရပ်များ:
▪ပြက္ခဒိန်အချိန်ဇယားဆွဲလွယ်ကူသောသင့်ရဲ့ချိန်း booking စေသည်။
အချိန်ဇယားစီမံအတွက်▪ပွဲများလှပစုံလင်သောစကားလုံး-ထုပ်ပုံရိပ်ယောင်နှင့်စိတ်ကြိုက်ရှာဖွေရေး function ကိုနှင့်အတူတင်ပြကြသည်။
အလွယ်တကူ▪ဇယားဖြစ်ရပ်များနှင့်တည်းဖြတ်ကူးယူနှင့်လျတ် menu ကိုဝစ်ဂျက်ကိုနှင့်အတူလက်ရှိဖြစ်ရပ်များကိုဖျက်ပစ်။
သင်သည်သင်၏ချိန်းလက်လွတ်ဘယ်တော့မှဒါ▪ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းမန်နေဂျာတဲ့ pop-ups, အသံများနှင့်တုန်ခါမှုများနှင့်သင်၏ရုံးစီမံခြင်းနှင့်အလုပ်အချိန်ဇယားကိုကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက် personalize သို။
Power မူလစာမျက်နှာ widget function သောပြက္ခဒိန် MAKER
▪ပြက္ခဒိန်ထုတ်လုပ်သူသင်သည်သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ရဲ့ home screen ကိုမှပြက္ခဒိန် Widgets တွေထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
အရောင်အစီအစဉ်ကိုထိပုတ်ပါအရေးယူနဲ့ app က start အမြင်တူသော▪ Professional ကအိမ်မှာပြက္ခဒိန် widget က features တွေ။
ခေတ်သစ်မိုက်စနှင့်ပိုပြီးတူသော▪ Professional ကအိမ်မှာပြက္ခဒိန် widget က themes များ။
▪ပြက္ခဒိန် + ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြက္ခဒိန်, စီမံအချိန်ဇယားဆွဲအီလက်ထရောနစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြက္ခဒိန်သို့မဟုတ်ရုံးပွဲအတွက်စုံလင်သည်။
လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သတိပေးချက်များနှင့်စီးပွားရေးနာရီ filter များအဘို့▪ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှုများထပ်တလဲလဲဖြစ်ရပ်ထောက်ခံမှု။
အခုအချိန်မှာပြက္ခဒိန် + Download နှင့် Android များအတွက်ရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးပြက္ခဒိန် app ကိုအပေါ်အရေးကြီးသောဖြစ်ရပ်များနှင့်ချိန်းအချိန်ဇယားဆွဲခြင်း start!
အောက်ပါ link ကိုလာရောက်လည်ပတ်နေဖြင့်ပြက္ခဒိန် + ၏ပရီမီယံဗားရှင်း Upgrade: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joshy21.vera.calendarplus
ငါတို့သည်သင်တို့၏တုံ့ပြန်ချက်နှင့် / သို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များတန်ဖိုးထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ကနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သုံးသပ်ချက်များအပိုင်းအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးစေခြင်းငှါအခမဲ့ခံစားရပါ။ သငျသညျပြက္ခဒိန် + ကြိုက်တယ်လြှငျ, ကို 5-ကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးပါ, ငါတို့ကမြင့်မားတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။
အန်းဒရွိုက် 5.1 သို့မဟုတ် devices များအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပျက်ကျမှုပြင်ဆင်ချက်
နယူးဝစ်ဂျက် setting များကိုယနေ့ဝစ်ဂျက်များအတွက်မျက်နှာပြင်။
အပြည့်အဝဘန်ဝစ်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူဗိုလ်မှူး update ကို
အခမဲ့အသုံးပြုသူများအတွက်သော့ဖွင့်ပရီမီယံ features တွေပါတဲ့နံပါတ်။
အသစ်ကအမှောင်ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူနောက်ထပ်အဓိက update ကို!
- အခြားတဦးတည်းမှတည်ဆဲဖြစ်ရပ်ရဲ့ပြက္ခဒိန် switching
- ထိုးထွင်းသိမြင်မိတ္တူ, ဖြတ်, ငါးပိ features တွေ
ပြက္ခဒိန် + ဇယားအစီအစဉျ App ကို
6.67 ကို MB
ယောရှုသည် & Company ကို Inc က